Cococa okanye Shintsha i-EGR Valve yakho kwikhaya
Ukuba imoto yakho ihamba kakuhle, unokuba neengxaki nge- valve yakho ye- EGR . Akukho mvavanyo yangempela ongayenza ekhaya ekhaya le-EGR valve function. Ukuba usususile i-valve yakho ye-EGR, kaninzi uyayigubungela kwaye uza kukwazi ukuva isithintelo esivela ngaphakathi nangaphakathi. Ukuba unokukuva ukuhamba, kukho ithuba elihle lokuba i-valve yakho ye-EGR ilungile kwaye kufuneka ihlambuluke ukubuyela kumsebenzi oqhelekileyo.
Ukuba awuyiva nantoni na, i-valve yakho ye-EGR iyakunamathela. Kakade ke, oku akusiyo vavanyo oluthembekileyo! Kodwa ukuba uhlawula ngokubanzi kunokuba uvavanyo oluchanekileyo, le nto ingaba yindawo yokuqala.
Ukuba ufuna ukucoca i-valve yakho ye-EGR, akunzima kakhulu. Oku kulandelayo ngamanyathelo aqhelekileyo asebenza kwiiyunithi ezininzi. Iifom entsha ze-EGR zisekhompyutheni kwaye zinefowuni ye-wiring ezixhunywe kubo. Kwiinqununu ezintsha, kubaluleke kakhulu ukuphepha ukufumana abacocisi bokuhlaziya kwi-wiring kunye nezixhuma.
Ukucoca i-EGR Valve yakho
Susa umgca wokucoca
Unyuke ngokucophelela umgca weruba wokucoca oxhunyiwe kwi-valve yakho ye-EGR. Ukuba i-brittle, ephukile, ephahliwe, eyonakaliswe ngandlela-thile okanye mhlawumbi ibonakala ityatile, yifake esikhundleni sayo. Iingxaki zokukhupha ziyimvelaphi yazo zonke iintlobo zeenjine zenjini.
Unqamle i-harness yombane
Ukuba i-valve yakho ye-EGR inomnxibelelwano wombane , yikhuphe ngokucokisekileyo kwaye uyibeke eceleni ngokukhuselekileyo.
Unbolt i-valve ye-EGR
Susa iibhotshi ezifakela i-EGR valves assembly injini. Ukuba ayifuni ukuphuma xa ususile ama-nut okanye ama-bolts, ukhuselekile ukunika itampu encinane kunye nebhokisi lenkuni okanye isinyenyelo esincinci.
Ukuba i-gasket yakho ibheka ok (ingaqhathaniswa, iphahliwe okanye idibene) ungayisebenzisa kwakhona. Ukuba kungathandabuzeki, faka entsha. Ndihlala ndifake i-gasket entsha kunye naluphi na ukulungiswa-nje ukuthetha.
Gweba i-valve ye-EGR
Ukucoca umhlangano we-valve ye-EGR yintsebenzo emibini. Kuya kuxhomekeke ekubeni ufuna ukuya ngaphi na ixesha elingakanani. Okokuqala, cwina i-valve ye-EGR kwisitya esicocekile nge-carb cleaner. Ucocekile ngeCarb ucokola kakhulu kwaye kuyinto engathandekiyo. ngcwina ngaphandle okanye kwindawo efanelekileyo yomoya. Kubalulekile: Ukuba i-valve yakho ye-EGR inxibelelwano lwekhompyutha kukho, ungagcini isabelo sombane kwi-cleaner! Makucwebe ngobusuku ukuba unako. Ukuba oku akunakwenzeka, yeqa kwisinyathelo esilandelayo.
Isandla sihlambulule i-valve ye-EGR
Emva kokuba uvumele i-valve yakho ye-EGR igwebe ekuhlambulukeni ubusuku (ukuba kunokwenzeka) kufuneka uhlambulule amavesi ayo, ukuvula. kunye neengqayi ezincinane ngebhayisiki encinci. Amaqabunga amazinyo kunye nokucoca iipayipi zikhulu. Ukugqithisa okwenkcenkceshi omnyama okuphuma kuyo kukho amathuba akho okulungisa ingxaki. Kubalulekile: Xa uhlambulula ngesandla, qi ni sekisa ukusebenzisa iiglavu ezikhuselekanga ngamachiza kunye NOKUSEKELA KWIYE. Ucocekile ngeCarb izinto ezimbi. Eyona nto, ufuna ukuhlambulula yonke into onokuyifumana ngayo kunye neentambo zakho zokucoca.
Phinda ufake kwakhona i- valve ye- EGR
Ngoku unokubuyisela i-valve EGR ecocekileyo. Ungakulibali ukuphinda uthabathe ipayipi yakho yokuphumla kunye nokudibanela kombane xa kusebenza. Ukuba le nkqubo yasebenza, mkhulu! Ukuba usenokuba neengxaki ozivelayo zinokulandelwa kwi-valve ye-EGR, unokufuneka uqhube phambili uze uyitshintshe. Zininzi zazo zifumaneka ngentengo enhle kwi-Amazon.
Kunconywa ukuba abathengi baka-DIY ukuba bahlambulule i-valve ye-EGR xa kunokwenzeka ngezithuthi zabo. Akukho nto efana nokuguqula oko kungabiza kakhulu (okanye ubuncinci bendleko) ukulungiswa kwintsindiso yokulungisa ikhaya. I-valve yokukhupha i-valve ye-rearculation yindawo enhle ukuba kwenzeke, kuba kulula ukuyifumana, kulula ukuhlambulula nje ngokuba unganakulungi ukuhlambalaza, kwaye unelisekile kakhulu xa ubuyela kumsebenzi ofanelekileyo emva kokucoca.
Ukufaka iTank entsha yeTereel
Iingxaki zokusetyenziswa kweeyile
Iikharityhulam zeNkcazo zeNkcazo kunye neMigaqo-nkqubo